Manase agyapade wɔ atɔe fam (1-13)
Wɔmaa Yosef asefo asaase no bi kaa ho (14-18)
17 Na ntonto no+ yii Manase+ abusuakuw no de maa wɔn, efisɛ ɔno ne Yosef ba panyin.+ Manase ba panyin Makir+ a ɔyɛ Gilead papa no nyaa Gilead ne Basan+ efisɛ na ɔyɛ ɔsabarima. 2 Na ntonto no yii Manase asefo a aka no nso de maa wɔn sɛnea wɔn mmusua te: Abiesar+ mma ne Helek mma ne Asriel mma ne Sekem mma ne Hefer mma ne Semida mma. Eyinom ne Yosef ba Manase asefo mma mmarima no, sɛnea wɔn mmusua te.+ 3 Nanso Manase ba Makir ba Gilead ba Hefer ba Selofehad+ de, na onni ɔbabarima biara; ne mma nyinaa yɛ mmea. Ne mma mmea no din ni: Mahla, Noa, Hogla, Milka, ne Tirsa. 4 Na wɔbaa ɔsɔfo Eleasar+ ne Nun ba Yosua ne mpanyimfo no nkyɛn bɛkae sɛ: “Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ ɔmma yɛn agyapade wɔ yɛn nua mmarima mu.”+ Enti ɔmaa wɔn agyapade wɔ wɔn papa nua mmarima mu sɛnea Yehowa kae no.+ 5 Manase san nyaa nsaase du; ɛsono Gilead ne Basan asaase a ɛwɔ Yordan agya* no,+ 6 efisɛ Manase mma mmea no nyaa agyapade sɛnea ne mma mmarima nyaa agyapade no, na Gilead asaase no bɛyɛɛ Manase asefo nkae no agyapade. 7 Manase hye no fi Aser kɔ Mikmetat,+ wɔ Sekem+ anim. Ɔhye no fi hɔ fa anaafo* kɔ En-Tapuafo asaase so. 8 Tapua+ asaase no bedii Manasefo nsam, nanso Tapua kurow a ɛwɔ Manase hye so no yɛ Efraim asefo dea. 9 Ɔhye no sian kɔ Kana Subon no ho, subon no anaafo fam. Ná Efraim nkurow no bi wɔ Manase nkurow no mu,+ na na Manase hye no wɔ subon no atifi, na ano kɔpem po no ano.+ 10 Anaafo yɛ Efraim dea na atifi nso yɛ Manase dea; ne hye kɔpem ɛpo no ano.+ Wɔne* Aser bɔ hye wɔ atifi na wɔne* Isakar nso bɔ hye wɔ apuei. 11 Nea Manase nyae wɔ Isakar ne Aser nsaase so ne Bet-Sean ne ɛho nkuraa, Yibleam+ ne ɛho nkuraa, Dor+ mu nnipa ne ɛho nkuraa, En-Dor+ mu nnipa ne ɛho nkuraa, Taanak+ mu nnipa ne ɛho nkuraa, ne Megido mu nnipa ne ɛho nkuraa, nkurow abiɛsa a egu nkoko so. 12 Nanso Manase asefo antumi anko amfa nkurow yi, na Kaananfo kɔɔ so tenaa asaase no so.+ 13 Bere a Israelfo ho yɛɛ den no, wɔmaa Kaananfo no yɛɛ nkoadwuma,+ nanso wɔantu wɔn amfi hɔ korakora.+ 14 Na Yosef asefo no kobisaa Yosua sɛ: “Adɛn nti na woabɔ ntonto ama yɛn* asaase baako pɛ,+ na woatwa asaase baako ama yɛn sɛ yɛn agyapade? Yɛyɛ ɔman kɛse, na Yehowa ahyira yɛn abedu sesɛɛ.”+ 15 Ɛnna Yosua ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ woyɛ ɔman kɛse saa a, ɛnde foro kɔ kwae a ɛwɔ Perisifo ne Refaimfo asaase so no,+ na kobu hɔ fa, efisɛ bepɔw so asaase a ɛwɔ Efraim no+ sua ma wo.” 16 Na Yosef asefo no kae sɛ: “Bepɔw no sua ma yɛn, na Kaananfo a wɔte bon no mu nyinaa,* wɔn a wɔte Bet-Sean+ ne ɛho nkuraa mu ne wɔn a wɔte Yesreel Bon mu*+ no wɔ nteaseɛnam+ a sekan tuatua ho.”* 17 Enti Yosua ka kyerɛɛ Yosef fi, Efraim ne Manase sɛ: “Woyɛ ɔman kɛse na wo ho yɛ den yiye. Ɛnyɛ asaase baako pɛ na wubenya,+ 18 na mmom bepɔw no so nso bɛyɛ wo dea.+ Ɛwom sɛ ɛyɛ kwae de, nanso bu fa, na ɛhɔ na w’asaase no ano bɛpem. Kaananfo no ho yɛ den na wɔwɔ nteaseɛnam a sekan tuatua ho* de, nanso wubetu wɔn afi hɔ.”+
^ Kyerɛ sɛ, Manasefo anaa Manasefo asaase ne.
^ Anaa “asaasetraa no so nyinaa.”